Gaari ay saarnaayeen dad shacabka ah oo la rasaaseeyay.
Wararka ka kmaanaya deegaanka Dhabad ee Gobalka Galgaduud ayaa sheegaya in Koox Hubeysan ay dad Shacab ah rasaas ku furay gaari ay saarnaayeen.
Ahlu Sunna oo xirtay Radio Galguduud
Dagaal Beeleedkii ka dhacay Galgaduud oo Heshiis hordhac ah laga gaaray
Maamulada Degmada Gurceel iyo Deegaanka Balanbal ee Gobolka Galgaduud ayaa waxaa ay sheegeen in Heshiis Hor dhac ah ay ka Gaareen Dagaal Beeleed ka dhacay Gobolka Galgaduud ee Bartamaha Soomaaliya.
Kooxo burcad ah oo Galgaduud ku dhacay gaari rakaab ah
Kooxo burcad ah, ayaa shalay galinkii dambe ku dhacay gaari xamuul ah inta u dhaxeysa deegaannada Gudinlabe iyo Mareergur ee gobolka Galgaduud, bartamaha Soomaaliya.
Ahlu Sunnah iyo QM oo ku kulmay Galgaduud
Sagal Radio Services • News Report • November 17, 2012
Saraakiil ka tirsan Jimciyadda Quruumaha ka dhaxeeysa, ayaa shalay magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud kulan kula qaatay saraakiil ka tirsan maamulka Ahlu Sunnah Waljameecah.